Ikhwalithi Ephakeme Isikhwama sephepha se-Kraft sikaKhisimusi sokuphrinta kwelogo esinefektri yesibambo sezintambo kanye nabakhiqizi | Langhai
Igama lomkhiqizo Isikhwama sephepha se-Kraft sikaKhisimusi esiphrintiwe nge-logo esinesibambo sezintambo
Ikhodi Yomkhiqizo 4819400000
Okubalulekile Iphepha le-kraft le-120-250gsm
Usayizi 23*28*10cm/Usayizi owenziwe ngokwezifiso
Bamba Sonta/isibambo sephepha esiyisicaba/isibambo sentambo/isibambo seribhoni/enziwe ngendlela oyifisayo
Ukuphrinta Ukuphrinta kukasilika,, ukuphrinta kwe-offset, ukugxiviza okushisayo, i-UV, njll.
Ukusetshenziswa Iphromoshini, ukukhangisa, iphakethe lokuthenga
I-oda elincane 1000pcs
I-FOB Port Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Guangzhou, Qingdao
Inkokhelo T/T,Paypal,Western Union,L/C,D/P nokunye.
Amandla Okukhiqiza Izingcezu ezingu-60000 zokuphrinta ngokwezifiso ngenyanga
Isikhathi Sokuhola Isampula 1-7 izinsuku
Isikhathi sokuthumela 2-5 amasonto
Ukupakisha Ipakishwe esikhwameni se-OPP, isikhwama sezingcezu ezingama-200 esipakishwe ebhokisini
1.Singabakhiqizi bezikhwama abangochwepheshe
2. Ithimba lebhizinisi lizokunikeza ngamasevisi e-OEM aqeqeshiwe
3.Izinhlobonhlobo zemikhiqizo enempahla ehlukene, usayizi nokuma, nokunye okukhethayo
I-4.Iminyaka engaphezu kwe-16 yokukhiqiza kanye nesipiliyoni sohwebo lwangaphandle
I-5.Abasebenzi abanekhono kanye nokuphatha okuphumelelayo kuqinisekisa izinga elihle nokulethwa okusheshayo
Isebenza Ekuthengeni, Izingubo, Isipho, Ukukhangisa, Ukukhangisa kanye Nesikhumbuzo
Okubalulekile Iphepha Lobuciko, Iphepha Le-Kraft, Ibhodi Lendlovu, Ibhodi LeDuplex, Iphepha Elikhethekile
Umbala Umbala we-CMYK/Pantone
Usayizi Ngokwezifiso Ngokusekelwe Ezicelweni Zakho
Ubukhulu 150gsm, 210gsm, 250gsm, 300gsm noma Custom
Surface Finishing Ecwebezelayo/Matte Lamination, Gold/Silver Hot Foil, Embossing/Debossing, Spot UV, Vanishing njll
Indlela Yokuphrinta Ukuphrinta kwesikrini/Ukuphrinta kwe-Offset/Ukuphrinta kwe-Flexo
Izinhlobo Zokubamba Isibambo seribhoni, isibambo sentambo sePP, isibambo sikakotini, isibambo seGrosgrain, isibambo senayiloni, isibambo sephepha elisontekile, isibambo sephepha eliyisicaba, isibambo se-Die-Cut noma esenziwe ngokwezifiso
Isici Ihlala isikhathi eside, i-Eco-friendly, i-Heavy-Duty, iyasebenziseka kabusha
Ifomethi Yobuciko Ifomethi ye-AI/CDR/EPS/PDF
Ikhwalithi yokulawula Imishini eseqophelweni eliphezulu, kusukela kokubalulekile kuye kokwenziwayo, ihlolwa ngokuqinile futhi ilandelelwe kuzo zonke izinyathelo
Indlela Yokuthumela Ngolwandle/Umoya/Express
Isikhathi Sesampula 1-2 izinsuku
Usayizi Ojwayelekile Wereferensi Yakho (Ububanzi*Ukujula*Ubude)
Usayizi omncane(mm) Usayizi Omaphakathi(mm) Usayizi Omkhulu(mm) Usayizi Omkhulu Kakhudlwana(mm)
Phawula: Leli thebula njengereferensi nje, singakwenzela noma yimuphi usayizi.
1. Lithini ibanga lomkhiqizo wakho?
• Singabahlinzeki bemikhiqizo yokupakisha echwepheshile, ikakhulukazi emkhakheni wokupakisha izipho, singakunikeza izikhwama ze-PVC, izikhwama zendwangu, izikhwama zephepha, isevisi yokuphrinta, eminye imikhiqizo ehlobene yokupakisha kanye nemikhiqizo yokusiza yokupakisha.
• Sihlinzeka ngesevisi yokupakisha yephepha elilodwa, futhi samukela umklamo wangokwezifiso njengemfuneko yakho.
2. Ingakanani inani?
• Intengo inqunywa ngobuningi, impahla, izindlela zokuqeda, usayizi nezinye izici. Ngaphandle kwalokho, ngenxa yokuqamba kwethu njalo ubuchwepheshe, eminye yemikhiqizo yethu inenani elincintisana kakhulu, xhumana nathi ukuze wazi okwengeziwe ngathi uma uthanda.
3. Ungakwazi yini ukunikeza amasampula & yini isampula ukulethwa isikhathi?
• Impela, ngokuvamile sizokunikeza amasampula amahhala futhi udinga nje ukuthatha izindleko zempahla. Ngesampula yokuphrinta yangokwezifiso, kuzoba nenkokhelo yesampula edingekayo.
• Umkhiqizo wesampula uzothatha cishe izinsuku ezi-3-7.
4. Siyini isikhathi sokuhola?
• Cishe izinsuku eziyi-7 kuye kwezingama-20 ngokuya ngenani le-oda kanye nemininingwane yokukhiqiza.
5. Ungakwazi yini ukuhlinzeka ngedizayini yamahhala yemikhiqizo yami yokupakisha?
• Yebo, sinikeza isevisi yedizayini yamahhala, idizayini yesakhiwo kanye nomklamo olula wezithombe.
6. Hlobo luni lwefomethi yedokhumenti ozoyamukela ukuze iphrintwe?
• I-AI, CDR, PDF, PSD, EPS, JPG yephikseli ephezulu noma i-PNG.
7. Indlela yokuhambisa impahla?
• Ngolwandle noma ngomoya njengemfuneko yakho.
• Umsebenzi wangaphambili noma i-FOB, uma unomthumeli wakho e-China.
• I-CFR noma i-CIF, njll., uma udinga ukuthi sikuthumelele.
• I-DDP ne-DDU nayo iyatholakala.
• Izinketho eziningi, sizocabangela ukukhetha kwakho.
8. Hlobo luni lwenkokhelo owamukelayo?
• T/T, Credit Card, PayPal, West Union, MoneyGram, L/C, Cash, njll.
9. Ingabe ungumkhiqizi noma umthengisi?
• Singabakhiqizi e-China futhi imboni yethu itholakala e-Shanghai. Siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu!
10. Yiluphi ulwazi okufanele ngilunikeze uma ngifuna ukuthola ikhotheshini enembile?
• Usayizi, impahla, ukujiya kwephepha, imininingwane yokuphrinta, ukuqedela, ukucubungula, ubuningi, indawo yokuthunyelwa njll.
• Ungakwazi futhi ukusitshela nje isidingo sakho, sizokuncoma umkhiqizo.
Okwedlule: Isikhwama sekhofi se-Kraft esinesibambo sephepha esisontekile/ esiyisicaba
Olandelayo: Ilokhi yangokwezifiso ye-poly zipper eyisithwathwa epakisha ingubo yeziphu edonsa isikhwama sokupakisha sezingubo ze-Eva
Isikhwama Sephepha seKraft sikaKhisimusi
Kraft Paper Bag Green
Ukuthenga Isikhwama Sephepha se-Kraft
Isikhwama sekhofi se-Kraft esinephepha elisontekile/eliyisicaba ha...